Harun Macruf Oo Lala Damacsanyahay Shirqool La Mid ah Kii jamal khashoggi | Xaqiiqonews
Harun Macruf Oo Lala Damacsanyahay Shirqool La Mid ah Kii jamal khashoggi
Hay’adda Sirdoonka Soomaaliya NISA ayaa sheegtay in ay qaadi doonto tallaabo sharci ah oo ka dhan ah Haaruun Macruuf, iyadoo ku eedeysay waxa ay ugu yeertay “Falal ka dhan ah amniga qaranka”.
” NISA waxay talaabada sharciga ah ee ku haboon ku qaadaysaa Harun Macruf,” ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay NISA iyaga oo intaasi ku daray in Haaruun Macruuf uu u kacay xiriiro khatar ku ah amniga Qaranka iyo falal ka baxsan anshaxa warbaahinta.
Haaruun Macruuf ayaa idaacadda codka Mareykanka Voa-da u qaabilsan barnaamijka “galka baarista” kaasi oo inta badan ka warama wararka la xariirka aminga iyo Alshabaab.
Sidoo Kale Aqr..Sir..CIA-da Oo Markii ugu Horeysay Furatay Ciwaankii Ugu Horeeyey ee Instirgam ah
Lama oga sababta rasmiga ah ee NISA ay u bartilmaameedsaneyso Haaruun Macruuf, hase yeeshe xoge hoose ayaa sheegaya in khilaafka uu salka ku haayo loolan xagga wararka oo ka dhaxeeya Voa-da iyo Aljaziira.
Haruun Macruuf iyo Sirdoonka
Barnaamijyada uu tabiyo Haruun Macruuf ayaa inta badan lugaha la gala falal xiriir la leh sirdoonka, taasi ayaana loo badinayaa in ay keentay isku dhacan markii ugu horeysay dhaxmaray Haaruun iyo NISA.
Waxaa jira warar aysan Xaqiiqonews xaqiijin karin kuwaasi oo sheegaya in Haaruun Macruuf uu xiriir toos ah la leeyahay sirdoonka gudaha Mareykanka ee FBI iyo hay’adda sirdoonka CIA-da.